Date My Pet » 5 Zava-Ianao no Tokony Hanalavitra ny miresaka About amin'ny A Date Voalohany
Last nohavaozina: Jan. 19 2021 | 2 min namaky
Ny daty voalohany dia mety ho ny toko voalohany ny angano, fa mety ho tanteraka ihany koa ny loza satria nikasika fotsiny ny "untouchable" lohahevitra. Toa ka nahita ny fitiavana tao amin'ny sarimihetsika mora, fa iray ihany no eo amin'ny tena fiainana? Romance tsy manidina foana hampandeha tsara, ary rehefa nahita ny fanahy vady Tsy mora ho an'ny tsirairay avy amintsika. Indraindray izany fanontaniana ny fahafantarana ny fomba hiady ho azy, sy ny fomba tsy fanaovana faux pas, indrindra fa amin'ny daty voalohany. Na dia izao no fotoana rehefa miezaka hamantatra ny zavatra fototra momba ny samy, dia tsara indrindra soa aman-tsara ianao mifikitra amin'ny resaka lohahevitra. Ireto misy zavatra tokony tsy miresaka ny amin'ny daty voalohany:
Tsy misy fomba fijery ara-politika, hoy ny tsy manan-danja, nefa azo antoka fa tsy ho azo antoka resaka lohahevitra ho daty voalohany. Nitondra ny politika mety fotsiny hamoronana tontolo 'ny fankahalana, ary izany no tsy izay tianao. Na izany na tsy, dia tsy ho lasa demokraty Repoblikana na ny mifamadika amin'izany ... raha kely indrindra amin'izao dingana tsy ny fifandraisana.
Ny taloha(izany no)
Raha toa ianao ka tsy nisy zatovo, tokoa ianao manana fifandraisana tsy ao ny portfolio anao, ary izany no tanteraka tsara. Daholo ny olona no. Na inona na inona tsy maintsy hilaza momba ny taloha / exes, daty voalohany dia tsy ny fotoana toy izany ny resaka. Izy no mifehy Bitch? Tanteraka izy jerk? Tsy zavatra tianao hilaza ny olona iray izay vao nihaona rehefa / izy Mety hieritreritra ianao na inona na inona afa-tsy ny fanahy mangidy. Raha amin'ny lafiny, ianao ihany no teny be momba azy ireo, ianao dia mety ho ny fahatsapana tsy nahazo azy, ary ianareo dia tsy, noho izany, vonona ny hanomboka fifandraisana hafa. Raha ny daty miezaka mamantatra ny antony nisaraka amin'ny taloha, manome ny valiny mazava fa tsy misy manome tsiny na ny fitsaohana.
Ny tsy dia madio aloha
Madio na dirtier, isika rehetra dia manana lasa, ary izany dia tsy midika fa tsy hoe mba hahita ny fitiavana. Na izany aza, Tsy midika izany tsy maintsy mirehareha momba ny lasa misshapes eo amin'ny daty voalohany. Dia tsy maintsy tonga madio ny sasany, fara fahakeliny, ireo zavatra ireo amin'ny fotoana iray raha vao manomboka miaraka ny fifandraisana, nefa tsy mba hampitahorana ny daty hiala hatramin'ny niandohany fotoana mihaona.
Ny niteraka famantaranandro
Rehefa mandeha ny fotoana amin'ny, ny vehivavy indrindra, fa koa ny olona manomboka mba hihaino ny famantaranandro niteraka ticking. Nahazo izany ianao taona izay te-hanomboka ny fianakaviana sy ny manan-janaka, fa ianao dia tokony hatao aloha mahita ny mpiara-miasa tsara ho azy. Aza mametraka ny sariety eo anoloan'ny soavaly!
Ny firaisana ara-nofo amin'ny toerana tena toerana
Na inona na inona, ary mitodika anao amin'ny izay manao am-pandriana Mahafinaritra, dia tsy ny zavatra voalohany ny daty tianao ho fantatra momba anao. Toy izany koa, Tsy izany no zava-dehibe indrindra no te-hahafantatra momba ny mety ho mpiara-miasa. Andraso mandra-hahatratra ny tsara haavon'ny firaisana ara-nofo mba miresaka momba ireo zavatra ireo.